Jody Speer ayaa ku biiray machadka McKnight Febraayo 2015 wuxuuna yahay Agaasimaha Teknolojiyada Warfaafinta. Speer wuxuu leeyahay labadaba masuuliyad istiraatiijiyadeed iyo xeelad ah oo ku wajahan nidaamyada lagu taageerayo shaqada iyo hadafka aasaaska.
Speer waxay 25 sano ka badan khibrad u leedahay dhinaca ammaanka, maamulka, maareynta khatarta, istaraatiijiyada u hoggaansamida, hawlaha IT, maareynta mashruuca, iyo horumarinta barnaamijyada iyo nidaamyada.
Ka sokow maaraynta IT, hogaamiyaha Speer wuxuu horseeday mashaariic badan oo gudaha ah oo ay ka mid yihiin tamar farsamo oo dhameystiran, horumarinta maareynta xogta, iyo dib u soo kabashada dib u soo kabashada iyo barnaamijkii sii socdo ee ganacsiga.
Horey Speer wuxuu ahaa lataliye maareynta amniga iyo latalinta khatarta oo ku saabsan noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan hay'adaha maaliyadeed, wax soo saarka, dawladda federaalka iyo gobolka, iyo waxbarashada.
Speer waa 1986 qalinjabiyey Jaamacadda Wisconsin-River Falls oo leh Bachelor of Science ee nidaamka kombiyuutarada. Inta lagu guda jiro xirfadaheeda waxaay kasbatay dhowr shahaadooyin IT ah oo ay ku jiraan CISA (Auditor System Confidential System), CRISC (Control Systems Risk and Control Systems), PCIP (Professional Payment Card Professional) iyo GCIH (GIAC Certified Handler Handler).
Shaqada banaanka ka ah, Speer waxay ku raaxeeysataa dushiisa iyada oo lala socdo qoyskeeda, mashaariicda guriga, iyo inay jabiso jilibyadeeda.